Rudo muhukama | Mapeji evaravara ehurukuro
Nokufamba kwenguva, rudo runogona kuderera
Vose vakaroorana vari mukuda kwekuda
Zviduku zviduku nezvipo zvinogona kuita zvakawanda
Ko rudo runogona kuuya zvakare here?
A dine romantic dinner pamwe chete
Usarega rudo rwacho rukazorora zvakare
Kunyanya kana hukama huripo kwemakore anoverengeka, dzimwe nguva zvinogona kuitika kuti rudo muhukama huri kuderera zvishomanana. Izvi zvakajairika, asi vakaroorana vanogona kuita chimwe chinhu pamusoro pazvo, nokuti zvechokwadi zvakakosha kuti rudo rwacho runochengetwa muhukama. Kuti urongwa uhwu hubudirire, zvakakosha kuti vaviri vari vaviri varo vakaratidzira kuzvipira uye kuda kudzosa rudo kumashure.
Kuvandudza rudo muhukama
Mushure mezvose, hukama hunogara hunosanganisira vanhu vaviri. Iye zvino, chokwadi, mubvunzo unomuka pamusoro pekuti rudo rungava sei chikamu chehupenyu hwezuva nezuva zvakare. Kune nzira dzakasiyana-siyana umo hune rudo huri pamwe chete muukama hunogona kuwanikwa.
Vakaroorana vechidiki vane rudo rwemanheru
Kazhinji, hazvisi zvakawanda zvakakosha kuisa rudo mumubatanidzwa, nokuti kunyange zviratidzo zviduku zvinobatsira izvi.
Rimwe rudo runofanira kuvapo nguva dzose, nokuti vaviri vanogona kubatsirwa kubva munharaunda yekudanana. Nokuda kwechikonzero ichi, zvinonzwisisika kuvimbisa kuti rudo runodzokera kune hukama uye hunoita kuti vashandi vaswedere pedyo. Kuva nechingwa pamwe chete kana kupa chipo chiduku kune waunofambidzana kunobatsira kuchengetedza rudo rwacho kurarama.
Kunyangwe basa rekuchengetedza rakabatana rinogona kuva nechokwadi chokuti kuswedera kune mumwe wako kunonzwisisika seyakanaka. Dzimwe nguva zvinogona kuva zvakaoma kuita zviratidzo zvekuda kwenguva refu, asi kuedza kunowanzobatsira, sezvo hukama huzere nekudanana kunogona kupa hupenyu hunofadza kune vose vari vaviri. Asi chii chinoita kuti rudo rurege kupera mune dzimwe nguva?
Kunze kwekuti zviyero zvakakodzera zvakatorwa, zvinogona kuitika kuti rudo rwepabonde muukama hunopedza nguva. Pakutanga kwehukama hwehukama, kufarira kune wawakaroorana naye kwakanyanya kwazvo, uye nenzira yakawanda, kuedza kwakawanda kunoitwa kuti kugutsikane naye uye kumufadza.
Asi pane imwe nguva muhukama hunouya nguva apo hupenyu hwezuva nezuva hunotanga. Rudo rwomumwe wako dzimwe nguva rwunotorwa rushoma, uye kuedza kwaimbova chinhu chinokosha muhukama kunopedzisira kuva zvishoma. Pasina zviratidzo zvekuda, zvinongoitika zvekuti zuva rega rega hupenyu huri kuramba huchikwidziridza uye rudo muhukama huri kupfupika.
Kunyangwe mune chimwe chinhu chakanaka chibvumirano, zvinogona kuitika kuti rudo rwacho runoderera nokukurumidza.
Ichokwadi, inonzwisisa zvakakwana kudzivirira izvi. Kune nzira dzakawanda dzekudzivirira ukama kubva pakurasikirwa rudo. Rudo rwacho runofanira kugara ruchiri nyaya yemazuva ano muhukama. Zvisinei, kwete chete mumwe wevamwe vanogona kupa zviratidzo zvekuda. Pane kudaro, inofanira kuva mune zvinodiwa zvevadzidzi vose kuti vatarise rudo.
Rudo mune ushamwari haruna kuuya pacharo. Vose vakaroorana vari muukama kana zvichiitika pakuchengetedza rudo rwemanzwiro. Kana vaviri vakaroorana vachiedza kuita kuti mumwe wavo afare, zviri nyore kwazvo kuumba hupenyu hwomukomana zuva rimwe nerimwe hunogona kugutsikana muhukama.
Kuburikidza nekushandiswa kwevakaroorana, rudo rwacho runogona kuitwa zvakasiyana-siyana, nokuti zvirokwazvo, munhu mumwe nomumwe ane pfungwa yakasiyana yechitenderano chedanana. Munhu wese anonzwa zvimwe zvinhu pane rudo uye ndicho chikonzero vanhu vakaroorana vanofanira kufungisisa pamusoro pezvingadiwa nemumwe wako. Muhukama hwakange hwave huchienderera mberi kwechinguva, muvakidzani wacho kazhinji akawana kuzivana zvakanaka uye anoziva zvinhu zvaanoda.
Izvi zvinoita kuti zvigadzike kugadzirisa chimwe chinhu chinokumbira kune wawakaroorana naye uye kuwedzera mikana yokuti chiitiko chichaonekwa sechiratidzo chedanana. Kana vaviri vakaroorana vakashandira ukama uye vanoita zvose zvavanogona kuchengetedza kana kumutsidzira rudo, mikana yekuzadzisa chinangwa ichocho chikuru kwazvo kupfuura kana mumwe chete anoshandira chinangwa ichocho. Ive neine zviduku zvishoma kutanga kwakatendeka kunogona kuitwa.
Kunyangwe chiito chiduku chinogona kupa ruchiva rukuru muhukama. Semuenzaniso, hazviiti kutora zvakawanda kuti utenge maruva emaruva mushure mebasa uye uuye navo kune mumwe wako. Vanhu vazhinji vanofara pavanogamuchira maruva sechipo.
Zvimwe zvipo zvisingatarisirwi zvinogonawo kufadza mumwe wako. Mushure mezvose, kupa zvipo muhukama hakusi kungoitika pamazuva akafanana neKrisimasi, Zuva raValentine kana zuva rokuzvarwa. Chipo, chinoitwa nenzira isingatarisirwi, kazhinji chinopa mufaro mukuru, sezvipo, izvo munhu anotarisira semubatsiri pamazororo evanhu ehe uye uye zvinenge sechinhu chaicho.
Nokudaro, zvipo zvakadaro zvinogona kuita kuti mumwe wako afare. Hazvina mhosva kuti yakakura sei kana inodhura iripo ikozvino. Iyo inobata chiito, nokuti inoita kuti zvive pachena kuti kune huri nemanzwiro akasimba kune mumwe wako. Zvisinei, zvipo zvinoshamisa zvekudaro hazvifanirwe kuitwa zuva roga roga, zvisinei kuti zvichakurumidza kuva nyaya yechokwadi. Zvipo zviduku zvinofanira kuchengetedza kunyanya kwavo kuitira kuti vakwanise kuramba vachiita kuti varambe vaine rudo muukama.
Kunyange mashoko okudanana, anotaurirwa kana kupfupiswa mumutsamba unodikanwa, inzira yakanaka yekuratidza mumwe wako, manzwiro anonzwa. Zviduku zviduku uye zvipo zvinogona kubatsira kuchengetedza rudo rwuri kurarama kana kuti rudzorere. Asi nei rudo ruchikosha zvakadaro muhukama?
Rudo muhukama hunokosha
Nezviito zvekudanana kana unhu hune rudo unoratidza munhu ane hanya naye. Kakawanda, vanhu vanokanganwa kuonga zvavanenge vaine. Ukama hwakanaka hunofanira kugara huchichengetedzwa kuitira kuti rudo rwekudyidzana rusati rwakarasika.
Rudo rune rudo rungaita kuti vaviri vari vaviri vakwanise kufara uye nguva yakawanda
Saka chinhu chakanaka kana vaviri vakaroorana vachiedza kuchengetedza runyararo muhukama. Rudo haruri pachena. Izvi zvinosanganisira kushamisa uye unyanzvi, nokuti, chokwadi, zviratidzo zvepabonde zvinofanirawo kunge zvakasiyana-siyana, kuitira kuti dzidzivirire kuti dzirege kuva dzakanyanya. Kana iyo rudo, pasinei nekuedza kwevakaroorana navo, asi dzimwe nguva dzanyangarika kubva paukama, naizvozvo zvakakosha kuve nechokwadi kuti inodzoka.
Kunyangwe kana mafungiro ezvinyararire anonyangarika mukubatana, hazvirevi kuti yakanyangarika zvachose uye nokusingaperi. Pane kudaro, pane mukana wekuita nechokwadi chokuti rudo rwunodzokera kune hukama uye zvichida kunyange rakasimba kudarika kare.
Nguva dzinonakidza pamba
Mune zvimwe zviitiko zvinogona kunge zvakaoma zvikuru kudzorerazve rudo, asi muzviitiko zvakawanda zvakakosha kushanda, nokuti kubatana kwakazadzwa nerudo chinhu chikuru kune vose vari vaviri. Asi ndiani chaizvoizvo ane rudo? Vakadzi kana varume?
Ko vakadzi nevarume vane rudo zvakaenzana here?
Ichokwadi kuti hazvibviri kutaura kuti vakadzi kana varume vanodanana, nokuti munhu wese anonzwisisa chimwe chinhu neshoko rokuti romance. Vose vakadzi nevarume vanogona kuva nepfungwa yekudanana. Ukama hunogona kubatsira kana vaviri vakaroorana vachipa rudo rukuru muhukama uye nokudaro vanokurudzira kufara pamwe chete. Saka vakadzi nevarume vanogona kunge vachidanana. Asi zvingaita sei kuti vaviri vakaroorana vashandise manheru ezvokuda uye nzvimbo ipi yakakodzera?
Nzira imwecheteyo, iyo inogona kugadzirwa zvikuru, ndeyekudya muresitorendi. Nokudya muresitorendi, murume nomudzimai haafaniri kugadzirira kudya kwavo kwemanheru, uye panzvimbo pacho vanogona kufunga nezvekukurukurirana.
Kudya mune imwe nzvimbo yekutengesa yakanaka kunofungidzirwa zvikuru sechirongwa chekuda kwenguva yenguva yekuzorora. Pakava manheru anofadza, vaviri vacho vane mukana wokutaurirana zvakare kuti vasimbise manzwiro avanoita. Kwete kungoita kudya pamwe chete muresitorendi kunogona kusimbisa romance muhukama. Zvinoshamisa zvinokodzerawo kuti zvibudirire chinangwa ichi.
Munhu anofanirwa kufungidzira sei paanoshamisika?
Kuda kudanana kunogona kutarisa zvakasiyana. Somuenzaniso, zvinogoneka kurongedza manheru ezvokuda iwe pachako wozoisa muchiito kuitira kupa mudiwa kufara nenzira iyi. Kunyangwe manheru mumusha wako unogona kushandiswa kugadzira manzwiro edanana.
Fadzwa nerudo mumba mako
Mhanzi mutsva, sofa yakasununguka, mafirimu anovhiringidzika uye mavhenekeri anodikanwa. Kunyangwe nerubatsiro rwezvinhu izvi zviduku, pane mukana wekupedza manheru ezvokuda, izvo vaviri vanogona kufara nazvo zvakakwana. Hazvisi zvakakodzera kusiya musha wako pakarepo apo kugadzirira manheru kwapera.
Iva nemafungiro emumwoyo nemumwe wako
Mamwe manheru anovhenekera pane sofa anogona kunge ane rudo. Zvechokwadi, kune dzimwe nzira dzinogona kubatsira kuchengetedza rudo muhukama. Vakaroorana vanoda kupedza nguva yavo yekusununguka vanogona kubata mukana uye kutsvaga chido chekuita, izvo vaviri vari vaviri vanogona kuita pamwe chete.
Kutarisana nemumwe wako
Zvechokwadi, zvinokurudzirwa kugara uchibatanidza rudo nehupenyu hwezuva nezuva muhukama. Semuenzaniso, vanobvumirana vanogona kubatana pamwe chete kuratidzira kuti vanofarira zvido zvekuita naye. Nokugovana zvido, vakaroorana vane mukana wekushandisa nguva yavo yekusununguka pamwechete.
Mukuwedzera, zvinokwanisika kutsvaga chido chinowanzobatana umo vaviri vari vaviri vane mufaro wavo, nokuti mushure mezvose, kunewo mabasa okuzorora anonzi anofarira. Semuenzaniso, vakaroorana vanogona kutora danho yekutamba nekuvandudza unyanzvi hwavo hwekudha, saka kuisa nounyanzvi mitambo yakangobva kuidzidzira mukutamba pasi.
Chimwe chido chekugovana chinogona kubatsira kuwedzera rudo muhukama. Nenzira iyi, zvinogonawo kuratidzira waunofambidzana kuti kune chido chikuru maari. Pane imwe nguva yakakwanisa kuunza rudo zvakare muukama, vaviri varoorana vanofanira kuve nechokwadi kuti havazorozve zvakare.
Vose vakaroorana avo vakambotarisana nekudanana muhukama hwavo vanoziva kuti kugadzirisa zvekudzokorora muhukama kunogona kuva kwakaoma zvikuru. Nokuda kwechikonzero ichi, zvinonzwisisika kuve nechokwadi chokuti ruchiva rukuru harusi kurarazve. Kuita zvepabonde chinhu chinonyanya kukosha mumhuri dzose. Ndicho chikonzero haafaniri kushayikwa mune chero kubatana.
Kunyange zviduku zviduku zvemukati zvinogona kuita kuti rudo rwehukama hurege kuregererwa. Kutaura mamwe mazano akanaka kana mazwi soulful haazove akaoma uye mumwe wako achazvikoshesa. Kushanyira kune imwe nzvimbo yekudyara kana kuti manheru anochengetedza pamba inzira dzakanakisisa dzekushandisa nguva yako newawakaroorana naye uye kutaurirana, nokuti zvirokwazvo, kukurukurirana kukuru muukama kunokosha. Iko ikozvino kunogona kuburikidza nekuedza zvishoma kudzivisa rudo kubva pakuvata muhomwe.
Relationship killer | Ushamwari pamwe noukama
Nyaya yefairytale Hans Christian Andersen - The ...
Kusvuta muhutano Utano & Baby
Kunze dziva dzimba nemhuri
Dzidzo yevana | zvepabonde
Raira muvharo revana | dzidzo